သိ Siderodromophobia | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား > သိ Siderodromophobia
ခရီးသွားလာအချို့ကုထုံးနိုင်ပါတယ်; အတူတူပင်အခြားသူများများအတွက် phobias တွေအများကြီးဖို့ ဦး ဆောင်လမ်းပြနိုင်နေစဉ်. People who like traveling will probably even looking at their ရထားထိုင်ခုံဘွတ်ကင် ခရီးသွားနှင့်သူတို့ခရီးသေချာ.
ခရီးသွားတွေအများစုဟာသူတို့ရဲ့ရထားထိုင်ခုံဘွတ်ကင်များအတွက်အွန်လိုင်းကိုကြည့်; အခြားသူတွေရုံစီးဆင်းမှုနှင့်အတူသွား Preferences နှင့်၎င်းတို့၏ရှိသည်လိမ့်မယ်နေစဉ် ရထားထိုင်ခုံဘွတ်ကင် အဖြစ်ပြုမိသောအခါသူတို့လာမယ့်သွားကြသည်ဘယ်မှာပေါ် မူတည်. လိုအပ်. တချို့လူတွေခံစားရကြောင်းရထားနှင့်ဆက်စပ်သော phobias လည်းရှိပါတယ်. ရထားကြောက်ရွံ့သောသဘောသည် Siderodromophobia အဖြစ်လူသိများသည်. Siderodromophobia ရထားနှင့်ဆက်စပ်သောအပေါငျးတို့သစိုးရိမ်မှုတွေသို့မဟုတ် phobias ဖုံးသောအလွန်ကျယ်ပြန့်အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်. ဒီ phobia အဓိကအားဖြင့်ဖုံးသောလူများ၏အဓိကအမျိုးအစားလူများရှိသည်သောကွောကျရှံ့ခွငျးဖွစျပါသညျ ပျက်ကျတဲ့ သို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်ဖြစ်ခြင်းမဟုတ်. ဒီထက်အခြား, လူတွေရထားပေါ်တွင်ကြသောအခါဖြစ်ပေါ်လာသောအခြားစိုးရိမ်မှုတွေရှိပါတယ်. စိုးရိမ်မှုတွေကြောင့်ပိုး phobia ရှိလိမ့်မည်, လူမှုရေး phobia သို့မဟုတ်ပင် claustrophobia.
Siderodromophobia အများအပြားကွဲပြားခြားနားသော phobias အခြေစိုက်. နောက်ထပ်, အခြေအနေကိုဘယ်လောက်ပြင်းထန်ပေါ် မူတည်.. နှလုံးရင်တုန်ကဲ့သို့သောလက္ခဏာများရှိစေခြင်းငှါ,, ချွေး, shaking or gastrointestinal symptoms. အချို့သောလူများအတွက်, အခြေအနေပင်ရှည်မတိုင်မီစတင်စေခြင်းငှါ, ရထားခရီးစတင်. ဤသည်အဓိကအားဖြင့်ကျနော်တို့ anticipatory စိုးရိမ်စိတ်အဖြစ်ကိုသိသောအရာကိုနှင့်အတူဆက်ဆံရေးမှာ. Anticipatory စိုးရိမ်စိတ်အမှန်တကယ် phobia သူ့ဟာသူထက်ပိုဆိုးပြဿနာများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်. အချိန်အများစုမှာကွောကျရှံ့ခွငျးအဘို့အအကြောင်းတရားများလူတစ်ဦးရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်တဲ့အနုတ်လက္ခဏာအတှေ့အကွုံနဲ့ဆက်စပ်နေတာ, အရာတစ်နေရာရထားနှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ပါတယ်. ဆိုးကျိုးဒီနေရာမှာနားလည်ရန်လိုအပ်ကြောင်းရှိပါတယ် အတှေ့အကွုံ သင့်စိတ်ကိုဆက်စပ်နေသည်သေချာပေါက်ကိုသင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်တစ်ခုခုဖြစ်ဖို့ရှိသည်ပါဘူး. ဒါဟာလည်းငါတို့လူတစ်ဦးအတွက်သို့မဟုတ်ပေါ်တွင်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ကိုလှည့်ပတ်မြင်ကြပြီနိုင်ကြောင်းအခြားသူတစ်ဦးသို့မဟုတ်အရာတစ်ခုခုကိုမှဖြစ်ပျက်ခဲ့ကြနိုင်ကြောင်းတစ်ခုခုဖြစ်နိုင်ပါတယ် မီဒီယာ.
ထိုနေ့၏အဆုံးမှာ, ထိုသို့ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်ရှိကွောငျးအရေးမင်; အဘယ်အရာကိုအရေးပါသငျသညျကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့်ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းနှင့်အားထုတ်မှုသည်သင်၏အသက်တာ၌နေရာတစ်နေရာဖန်ဆင်းတော်မူပြီသောကြောက်စိတ်ဖယ်ရှားပစ်ရအောင်ဘယ်လိုဖြစ်ပါသည်. လူအပေါင်းတို့သည် phobias ၏, Siderodromophobia သို့မဟုတ် ရထားတစ်စင်း phobia အလွန်လွယ်ကူစွာကု သ. သည်နှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အောင်မြင်မှုနှုန်းပြသခဲ့သည်, ကုသသည့်အခါ. အဆိုပါ phobia ဖယ်ရှားပစ်ရ, ပထမအဖြစ်ဝေးရထားစိုးရိမ်နေကြအဖြစ်မည်သည့်အနှုတ်လက္ခဏာအတှေးအဖယ်ရှားပစ်တဲ့အပေါ်အလုပ်မလုပ်လျှင်ယူခံရဖို့လိုအပ်ပါသောခြေလှမ်းများ. လည်း, အဆိုပါ phobia နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီသူသို့မဟုတ်သူမ၏အပြုအမူကိုပြောင်းလဲအပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည် ရထားနှင့်ဆက်စပ်သော. ထိုနေ့၏အဆုံးအကြမ်းခံသည်နှင့်သင့်လျော်သောစောင့်ရှောက်မှုနှင့်ကုသမှုမှတဆင့် fixed နိုင်က၎င်း၏တစ်ခုခုမှာ.
Leave your fear behind and အမိန့်ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်တစ်ဦးကရထားကနေလက်မှတ်တွေလေ့
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသားယူနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေနဲ့ ကိုယ့် link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးပေး ဤ blog post မှ, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fknowing-siderodromophobia%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
#siderodromophobia ရထား မီးရထားခရီးသွားလာအကြံပေးချက်များ travelfear